China SS Manifold Na Flow mita na igbapu valvụ emepụta na soplaya |Xinfan
SS Manifold na mita mmiri na valvụ igbapu
Ihe: Igwe anaghị agba nchara
Ọnụ ọgụgụ mmezi: 0-5
Okpomọkụ arụ ọrụ: t ≤70℃
Pipe alaka alaka: 3/4 "Xφ16 3/4" Xφ20
Oghere alaka: 50mm
Akwụkwọ ikike: afọ 2 Nọmba nlereanya: XF26001
Ọrụ mgbe erechara: Nkwado nka na ntanetị Ụdị: Sistemụ kpo oku ala
Aha ika: ỤFLY Okwu: Igwe anaghị agba nchara nwere igwe na-efe efe
Ebe amụrụ: Zhejiang, China Agba: Nickel gbazere
Ngwa: Ụlọ Nha: 1,1-1/4”,2-12ỤZỌ
Ụdị imewe: Oge a MOQ: 1 na-esetịpụ ọla kọpa manifold
Aha ngwaahịa: SS Manifold na mita mmiri na valvụ igbapu
1 ''X6 ỤZỌ
XF26001A igwe anaghị agba ncharandị nkesana eruba mita drain valve na bọl valvụ
XF26001B igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ nwere valvụ drain na valvụ bọọlụ
XF26001B igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ nwere valvụ ịgbapu mita eruba
XF26012A igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ nwere valvụ drain
XF26013 igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ nwere mita eruba
XF26015A igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ
XF26016C igwe anaghị agba nchara dị iche iche nwere valvụ ịgbapu mita eruba na valvụ bọọlụ
XF26017C Onye na-anakọta ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara nwere valvụ mmiri na-asọ asọ na valvụ bọọlụ
Mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi, usoro ikpo ọkụ, mix mmiri usoro, ihe owuwu wdg.
Atụmatụ nke igwe anaghị agba nchara manifold
1. Teknụzụ nrụpụta dị mma
Emepụtara ya na teknụzụ dị elu nke mba ụwa, ọ na-ebute ụzọ n'usoro njikwa ikpo ọkụ n'ala.
Ihe igwe anaghị agba nchara na-enye nkwenye dị mma a pụrụ ịdabere na ya.Ihe nkiri oxide bara ụba nke chromium (ihe nkiri passivation) dị n'elu ya nwere nguzogide corrosion siri ike yana ihe mara mma n'ọhịa HVAC.
2. Nguzogide mmetụta siri ike
Ndị na-anakọta igwe anaghị agba nchara nwere ihe eji arụ ọrụ dị mma, nwere ike iguzogide hammering na mgbasawanye ọkụ na nkwekọrịta, anaghị agbapụta ma ọ bụ gbawaa.Ngwunye nke sub-ejide nwere valvụ valvụ a na-eme ka ọ dị n'ime ya, nke nwere ike ịtọ nguzozi kwụ ọtọ nke alaka ọ bụla. Na-edozi n'ụzọ ziri ezi nke okporo ụzọ alaka ụlọ ọrụ, na usoro na-agba ọsọ na-azọpụta ike.
3. Ihe ndị ọzọ dị ọcha.
N'ihi na igwe anaghị agba nchara n'onwe ya nwere nguzogide corrosion siri ike, ọ bụghị naanị na ọ na-echebe àgwà mmiri site na mmetọ, kamakwa ọ na-egbochi ntinye nke ọnụ ọgụgụ na mgbidi dị n'ime nke ọkpọkọ mmiri. na-ezere nsogbu nke dochie manifold.
Ike ike nke igwe anaghị agba nchara 304 bụ okpukpu abụọ nke ọkpọkọ ígwè na 8-10 ugboro nke ọkpọkọ plastik.Ike nke data na-ekpebi ma a ga-eme ka ọkpọkọ mmiri sie ike, na-eguzogide ọgwụ, nchekwa na ntụkwasị obi.N'ihi ihe eji arụ ọrụ ya nke ọma, igwe anaghị agba nchara na ọkpọkọ ọkpọkọ nwere ike ịnakwere nrụgide mmiri dị elu ruo 10Mpa, ma dabara adaba maka inye mmiri dị elu.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara
Osote: valvụ bọọlụ ọla nwere nlele
Digital Manifold Maka Sistemụ Hvac
Ọdịmma dị elu maka ịchọ mma
Manifold na Ball Valve
N'okpuru ala manifold
Mmiri dị n'okpuru ala manifold
Manifold Na eruba mita bọl valvụ na igbapu ...
Brass Manifold na valvụ drain
Igwe anaghị agba nchara nwere mita eruba
igwe anaghị agba nchara manifold na eruba mita bọl v ...